သင့်ကလေး၏ အစားစားခြင်းအလေ့အကျင့်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ခြင်း – Pediasure
သင့်ကလေး၏ အစားစားခြင်းအလေ့အကျင့်နှင့် လိုအပ်ချက်များကို နားလည်ခြင်း
သင့်ကလေးအပေါ်တွင် မိဘအာဏာရှိသော်လည်း အစားအစာတစ်ခုခုမစားခင်တွင် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့် အလေ့အထများကို နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည် သင့်ကလေးအားစိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းစေဖို့ ကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းများ၊ လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းအကြောင်းများလည်းဖြစ်သည်။
သင်၏ကလေး ဘာကြိုက်တတ်လဲဆိုတာကို သိရှိစေရန်အတွက် အကောင်းဆံးနည်းလမ်းမှာ အစားအစာ နှင့် ပတ်သတ်သည့် ၎င်းတို့၏အပြုမူများကို ၇ ရက်စာ မှတ်တမ်းတင်ထားရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အချို့သောအစားအစာများကို မည့်သည့်အပြုအမူလုပ်ဆောင်သည်ကို သင်သိမြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အစာပြေအစားအစာနှင့် အာဟာရမရှိသောမုန့်များကို အများကြီးစားနေသလား? ထိုသို့ဖြစ်လျှင် အချို့သော အငြိမ်မနေမှုများနှင့် အလွန်အမင်းနိမ့်ကျမှုများကို ရှင်းပြနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကြီးထွားလာသည်နှင့် အမျှ သူတို့၏ ဆာလောင်မှုပုံစံများသည် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည် ထို့ကြောင့် မှတ်တမ်းတစ်ခုထားခြင်းအားဖြင့် မိဘတစ်ဦးက အကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ဖို့ စနစ်တကျ တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။
သင်ရွေးချယ်ပေးနေသ၍ ၎င်းတို့ရရှိသောအရာများအားလုံးကို လုံးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ သူတို့ဘာကြိုက်လဲသိဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာလဲ? သူတို့ကို ဈေးဝယ်ယူခြင်းနှင့် အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ပါစေ။ ထိုနည်းတူ အစာစားရန် အတင်းအကျပ်လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် အစာစားချိန်တစ်ခုစီမတိုင်မီ “ဗိုက်ဆာသည့်အခါ အချက်ပေးသည့်” နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။
ပုံသေပြုလုပ်ခိုင်းမည့်အစား၊ သင့်ကလေးအားရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းများပေးနေစဉ် လမ်းညွှန်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုပါ။ သူတို့ကို ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့် အစားစာများ စားစေချင်ပါက သင်ကိုယ်တိုင်အရင်စားပြပါ။ သင်၏ကလေးကို အသစ်အဆန်းများစားစေချင်ပါက သင်ကိုယ်တိုင်လည်း ၎င်းအရာများကို စားရပါမည်။ အကယ်၍သင်က အာဟာရမရှိသောသရေစာမုန်များနှင့် သကြားပါသော အစားအစာများကို အမြဲစားသုံးခြင်းကို သူတို့မြင်ပြီး သူတို့ကို စားခွင်မပေးပါက သင်သည် သူတို့ကို အခြားအစားအစာ တစ်ခုစားခိုင်းရန်အတွက် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ အစာစားနေချိန်တွင် တီဗီကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် နည်းပညာပစ္စည်းများသုံးခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့အာရုံထွေပြားမှု များသည် ဗိုက်ပြည့်သောခံစားချက်ကို တားဆီးစေပါသည်။
သူတို့ကအစားစာ စားခြင်းကို အပြစ်ပေးသည်ဟုမြင်ပါသလား?
အစားအစာများကို အပြစ်ပေးသည့်အနေနှင့် မကောင်းသောအပြုအမူအတွက်ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဆုလာဘ်အဖြစ် သုံးသောအခါ အစားအစာသည် စိတ်ဖိစီးမှု (သို့မဟုတ်) အခြားစိတ်ခံစားမှုများအတွက် ဖြေရှင်းရန် ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ တောင်သူလယ်သမားရှိခြင်းကြောင့် အစားအစာများရရှိခြင်းကို ပြောပြပါက အစာကောင်းကောင်းစားရန် တွန်းအားပေးခြင်းနှင့် လျှင်မြန်စွာမစားခြင်း သို့မဟုတ် အစားအစာအားလုံး ကုန်အောင်မစားခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါမည်။ နောက်သို့ပြန်ဆုတ်ကြည့်ပါက စိတ်ဖိစီးမှုများသည် အစားအစာ တစ်ခုတွင်သာမက ၎င်းတို့ဘဝ၏ အခြားအရာများတွင်လည်းရှိနိုင်သည်။ အစားအစာများနှင့်ပတ်သတ်၍ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းသည် ၎င်းတို့၏စိတ်ခံစားမှုများကို ထိခိုက်စေရုံသာမက ၎င်းတို့၏ အစာခြေဖျက်မှုကိုပါ ထိခိုက်စေပြီး ရေရှည်တွင် ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို ဖြစ်စေသည်။